OpenAPI | Zeevou Integrations
Integrations » OpenAPI
OpenAPI & Zeevou fampidirana
Ny OpenAPI dia misy ankehitriny hanitatra ny lisitr'ireo vaovao sarobidy izay tsy mitsaha-mitombo integrations fa ny mpampiantrano mpiara-miasa amintsika dia mety mila manatsara ny fahombiazan'ny orinasan'izy ireo. Azonao atao izao ny mampifandray ny kaontinao Zeevou amin'ny rindrambaiko ilainao ary mizara angon-drakitra mora amin'ny alàlan'ny OpenAPI (Application Programming Interface). Ny OpenAPI dia misy ho an'ny mpamorona, mpamatsy rindrambaiko ary mpanjifa te-hanangana fampidirana miaraka aminay, hifandray amin'ny rafitray, hampiroborobo ny orinasany ary hanome sehatra mandeha ho azy ambonimbony.
Midira ho mpiara-miasa fampidirana
URL redirect an'ny OAuth 2.0
Misaotra anao nangataka ny ho tonga Zeevou Integration Partner. Azafady mba jereo ny mailakao raha manaraka ny dingana manaraka.
Misy olana amin'ny fisoratana anarana ny fangatahanao. mba andramo indray na mifandraisa amin'ny mpandrindra ny rafitra.
Mifandraisa amin'ny lozisialy safidy hafa
Mahaiza ambaratonga mandeha ho azy ambony kokoa
Mankanesa any amin'i Zeevou ary ampidiro aminay
Inona ny OpenAPI?
OpenAPI dia fenitra eken'ny rehetra hanazavana API maoderina. OpenAPI, izay fantatra ihany koa amin'ny hoe API ho an'ny daholobe, dia "Application Program Interface" ampahibemaso na ampiasain'ny mpamorona maimaimpoana hananana fidirana amin'ny asa anatiny sasany amin'ny rindrambaiko sy serivisy web. Ny API dia manampy ny rindranasa mifampiresaka sy mizara angona.
Inona no ampiasaina amin'ny OpenAPI?
OpenAPI dia manana tombony lehibe ho an'ny mpanjifa sy ny mpamorona. Noho izany, ny fampiasana OpenAPI amin'ny orinasa isan-karazany dia afaka manatsara ny fahombiazany ary mamonjy fotoana, angovo ary vola amin'ny mpiasa amin'ny alàlan'ny fanatontosana automatique avo lenta kokoa. Azonao atao ny mahita eto ambany ny tombony azo amin'ny fampiasana OpenAPI amin'ny orinasanao fanofana maharitra:
Ny fampiasana OpenAPI dia mamonjy ny fotoanan'ny mpamorona ary mampihena ny vidin'ny fanaovana kaody satria mihena be ny filan'ny mpanamboatra frontend sy backend.
Miaraka amin'ny OpenAPI, ny hadisoana amin'ny kaody dia hahena.
OpenAPI dia afaka mihetsika toy ny tahiry izay mampihena ny vidin'ny asa sy ny doka ho an'ny orinasa.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana OpenAPI amin'ny fizotran'ny fitantanana fananana dia azonao atao ny manadihady sy manome antoka ny kalitao satria mamela anao hanandrana ny API an'ny rafitra ny OpenAPI ary mahazo antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetra.
Inona ireo fenitra OpenAPI?
OpenAPI dia manana endri-javatra - OpenAPI Specification na OAS - izay ahafahan'ny mpampiasa sy ny masinina mahatakatra izay atolotry ny serivisy ary inona ny capabilitIes misy azy. Amin'izany dia tsy mila manana fidirana amin'ireo kaody loharano na antontan-taratasy hafa izy ireo izay mahatonga ny fizotrany handany fotoana sy ho sarotra kokoa. Afaka mianatra bebe kokoa momba izany ianao amin'ny alalàn'ny Rakitra OpenAPI.
Inona ny fisie OpenAPI?
Ity dia rakitra JSON izay azonao sintonina Rakitra OpenAPI.
Ahoana ny fomba fiasan'ny Zeevou's OpenAPI?
Miorina amin'ny OpenAPI ny antontan-taratasin'i Zeevou sy ny API. Azonao atao ny misoratra anarana ho mpiara-miombon'antoka fampidirana ary mampiasa OpenAPI hampifandray ny rindrambaiko na ny rindranasao amin'i Zeevou.
Ahoana no anampian'ny Zeevou's OpenAPI?
OpenAPI no fenitra, ka izay API mampiasa OpenAPI dia manaraka ny fomba fanao tsara indrindra sy ny tombony azo avy amin'izany.
Inona avy ireo tombony azo amin'ny fampiasana OpenAPI amin'ny alàlan'i Zeevou?
Ny OpenAPI an'i Zeevou dia ahafahanao manangana fampidirana manokana ho an'i Zeevou. Na Zeevou Patron ianao izay te-hanangona angon-drakitra sasany ho toy ny iray-off, na amin'ny mitohy, na mitantana orinasa iray rindrambaiko hafa ary te hanampy amin'ny fanodinana automatique ny dingana ho an'ny mpanjifanao dia mamela anao hanao izany ny OpenAPI an'ny Zeevou.
Amin'ny maha-Zeevou Patron anao dia azonao atao ny mampiasa ny OpenAPI amin'ny scenario isan-karazany. Ohatra, raha te-hisintona antsipirian'ny famandrihana sasany ianao mba hampandehanana ny fandinihana namboarina dia azonao atao ny manantona ny API misy tsindry vitsivitsy fotsiny. Na dia azonao atao aza ny mamoaka vaovao sasantsasany mivantana amin'ny alàlan'ny asa fanondranana any Zeevou, izany dia hahafahanao mihazakazaka fangatahana namboarina kokoa. Ankoatr'izay, raha zavatra tianao hotohizina tsy miato dia avy eo io fampidirana io dia hanampy anao hitahiry fotoana be sy manahirana. Tranga fampiasana iray hafa dia ny faniriana hanangana tranokala famandrihana mivantana ho an'ny STR na hofan-trano fialan-tsasatra, ary hampiasa ny endrik'i Zeevou ao aoriana. Azonao atao ny misintona ny antsipiriany rehetra amin'ny lisitrao ary mamela ny vahiny hamandrika ny fijanonany, ary koa hamoaka vokatra sy serivisy fanampiny amin'ny alàlan'ny tranonkalanao manokana.
Amin'ny maha mpiara-miasa fampidirana anao dia azonao atao ihany koa ny miditra amin'ny ampahany amin'ny asan'ny Zeevou amin'ny alàlan'ny OpenAPI anay. Na te hisintona famandrihana, asa na antsipirian'ny vahiny ianao, ny OpenAPI dia manome fidirana feno sy feno. Raha misy sehatra ilainao amin'ny fampidiranao izay tsy mbola misy dia alefaso tsipika izahay ary hanao izay azonay atao izahay hanampiana azy ireo. Ny OpenAPI dia namboarina mifototra amin'ny haitao RESTful maoderina mba ahafahan'ny fotoana mety hamaly sy ny fitoniana amin'ny fifandraisana.